Wararkii ugu dambeeyay Xiisadda siyaasadeed ee ka taagan magaalada Dhuusamareeb | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay Xiisadda siyaasadeed ee ka taagan magaalada Dhuusamareeb
Wararkii ugu dambeeyay Xiisadda siyaasadeed ee ka taagan magaalada Dhuusamareeb
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Xilli ay dib u dhac ku timid Doorashada Galmudug ayaa waxaa dhanka kale Magaalada Dhuusamareeb ka soconaya dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo iska soo horjeeda, kuwaa oo loogu hardamayo dhismaha maamulka cusub.
Xilligii loo muddeeyay inay ku qabsoomto Doorashada Galmudug ayaa waxaa ku yimid dib u dhac, sida ku cadba jadwalkii ay bishii hore ee November soo saareen Guddiga Farsamada ee Maamul U Samaynta Galmudug. Guddigan oo ah midkii ay soo magacawday Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliya ayaa jadwalkii ay soo saareen waxaa ku cadaa in soo xulista Xildhibaanada cusub ay ahayd la bilaabo 29-kii bishii November, in Doorashada Guddoonka Baarlamaanka qabto 13-kii illaa 16-kii bishan iyo in Doorashada Madaxweynaha iyo Kuxigeenkiisa la qabanayo 17-23-ka bishan, taasoo aad arkeyso inay fashilantay.
Dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee iska soo horjeeda, kana soconaya Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa qayb ka ah Guddiga Farsamada, oo markale isu diyaarinaya inay soo saaraan jadwal kale oo Doorashada Galmudug ah, iyadoona Guddiga lagu eedeeyo inuu yahay mid u xaglinaya dhinaca Dowladda Federaalka.
Siyaasiyiinta ku qulqulaya Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxay wadaan abaabul ay uga soo horjeedaan Dowladda Federaalka, isla-markaana uu yoolkoodu yahay inay tartan adag dowladda kula galaan maamulka la damacsan yahay in dadka reer Galmudug loo sameeyo.
Toddobaadkan ayaa waxaa Xarunta Galmudug gaaray Xildhibaano, Siyaasiyiin, Odayaal Dhaqameedyo, ganacsato iyo qaar ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka, kuwaa oo la soo sheegayo inaanay ku qanacsanayn dhabaha ay dowladda u mareyso Maamul U Samaynta Galmudug.
Qaylo dhaan ayaa waxay ka taagan yahay xaraynta Odayaasha Dhaqanka ee lagu wado inay soo xulaan Xildhibaanada Baarlamaanka xigga, ka dib markii la sheegay in liiska laga saaray qaar ka mid ah saxiixe-yaashii Galmudug, laguna soo bedelay odayaal ay dhabarka ka riixeyso Villa Somalia.
Iyadoo toddobaadkan lagu wado inay Guddiga Farsamada dhameystiraan Odayaasha Dhaqanka ee loo xaraynayo soo xulista Xildhibaanada ayaa waxaa hadana jira caqabado ku gadaaman, marka aad milicsato sida ay Odayaasha Dhaqanka iyo Siyaasiyiinta Galmudug u diidan yihiin in sad bursi lagu sameeyo xubnaha Baarlamaanka soo socda, tiiyoo aad hadana arki karto sida ay isaga indho tireyso Wasaaradda Arrimaha Gudaha, oo iyadu ah midda looga dambeeyo dhismaha maamulkan.
Dhinacyada ka soo horjeeda dowladda oo ay ku jiraan xubno metelaya Madasha Xisbiyada Qaran ayaa Magaalada Dhuusamareeb ka wada shirar, ay ku doonayan inay ku abuuraan gaashaanbuur, haddiiba laga maarmi waayo, si ay culeys ugu saaraan qorshaha dowladda, ee ku aadan inay Baarlamaanka Galmudug ku yeelato xubno badan oo siyaasadeeda taageersan.
Sidoo kale shirarkan ayaa waxaa barbar socdo shirar kale oo haweenka Galmudug ay ka wadaan Xarunta Gobolka Galgaduud, waxayna ugu ololeynayan, sidii ay qoondo go’an uga heli lahaayen Baarlamaanka. Dumarku waxay ka digayan in sad bursi lagu sameeyo, qoondadooduna ay tahay mid laba taabtaan ah.
Marka aad arrimahan kala sheekeysato dadka degan Magaalada Dhuusamareeb waxay kuu sheegayan walaacooda ku aadan, sida aanay Doorashada Galmudug u noqon karin mid xalaalnimadeeda lagu qanci karo, haddii dhinacyo kala duwan oo danta dadka aan wadin ay ku dagaalamayan.
Xaaladda ceynkani oo kale marka ay taagan tahay ayay dadka ku hadal-qabsan jireen (Allow ur u bixi meel hebla iyo xaaladda waa Allow sahal).
Xiisad siyaasadeed oo ka taagan magaalada Dhuusamareeb